दोलखावासीलाई अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितका लागि १३ दिनदेखि सेयर संकलन सुरु भएको छ । गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं. १ र २ मा एक सातादेखि सेयर आवेदनका लागि टोलटोलमा जनप्रतिनिधि आफैं पुगेका छन् ।
सेयर आवेदनका लागि बैंकमा पुग्न सास्ती होला भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिले अहिले वडा कार्यालयमै आवेदन फाराम पुराएका हुन् । गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं. १ र २ का वडाध्यक्ष आफैं चरिकोटको महालक्ष्मी विकास बैंकबाट फाराम लगेर भर्न थालेका हुन् । वडाध्यक्ष वसन्त कार्कीले अहिले टोलटोलमा पुगेर फाराममात्र भर्ने काम गरेको बताए । “अहिले फाराममात्र भरेर राखेका छौं, इच्छुक कोही आफैं फाराम बोकेर बैंक पुग्छन्,” उनले भने, “अन्तिममा एक दिन फारामसहितको रकम संकलनका लागि बैंक आफैं आउँछ, त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौं ।” दुवै वडाले फाराम भर्नका लागि कर्मचारी परिचालन गरेका छन् ।
अहिले साविक जुँगू गाविसमा मात्र ३ हजार फाराम पुगेको छ । फोटोकपी र बैंक खाता तथा डिम्याट खाताका लागि स्थानीय जनउपकार साकोसले सहयोग गरेको छ । फाराम भर्नका लगि कागजपत्र अपुग हुनेका लागि कागजपत्र बनाउनसमेत अहिले जनप्रतिनिधिले सहयोग गरिरहेका छन् । यो प्रक्रिया बिहानदेखि साँझसम्म चल्ने गरेको छ ।
फाराम भर्न स्वयंसेवक
त्यसैगरी मेलुङ गाउँपालिका–६ मा पनि कार्यालयमै फाराम भर्ने व्यवस्था छ । त्यहाँ वडाध्यक्ष कुसुम लामाले फाराम लगेर कार्यालयमै २ जना स्वयंसेवक राखेर फाराम भर्ने व्यवस्था गरेका छन् । वर्षात्का बेला सित्तलीदेखि माथि गाडी जान नसक्ने हुँदा बैंकलाई नै भने बोलाउन नसकिएको उनले बताए । फाराम भरेपछि कतिले आफैंले बैंकमा लगेर बुझाउँछन्, विश्वास गर्नेको फाराम आफैंले लगेर पनि बैंकमा बुझाइ दिने उनले बताए ।
दोलखा अहिले अपर तामाकोसीको सेयरमय भएको छ । लामो प्रतीक्षापछि खुलेको सेयर भएकाले दोलखावासीको उल्लेख्य सहभागिता छ । गाउँमा पुगेको फाराम भदौ लागेपछि मात्र बैंकमा आइपुग्ने अनुमान छ । तामाकोसीको सेयरमा इच्छुकहरू नछुटुन् भनेर जनप्रतिनिधि आफैं महापर्वकै रूपमा लागेका हुन् ।
१ अर्ब ५ करोड ९० लाख बराबरको सेयर संकलन दोलखा र काठमाडौंबाट सुरु भएको छ । दोलखाका २६ र काठमाडौंका ११ वटा संकलन केन्द्रबाट सेयर संकलन जारी छ । तर सबैभन्दा बढी काठमाडौंबाट सेयरमा आवेदन परेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
वडाध्यक्ष नै फाराम भराउन सक्रिय
वैतेश्वर गाउँपालिकाका–७ का वडाध्यक्ष रेशम रिमाल, वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष रमेश अधिकारी, तामाकोसी गाउँपालिकाका सबै वडा तथा टोलटोलमा पुगेर फाराम भर्ने व्यवस्था गरेका छन् । तामाकोसीकै हावा र च्यामामा बैंकलाई नै गाउँमा आएर सेयर फाराम संकलनका लागि अनुरोध गरेका छन् । भर्खरै शाखा खोलेको हिमालय बैंकले गौरीशंकर गाउँपालिकाका वडा नं. ३, ४ र ५ बाट जनप्रतिनिधिकै आग्रहमा स्थानीयस्तरबाटै फाराम संकलन गरिरहेको छ । जिल्लामा जुँगू, च्यामा, सुनखानीलगायतका ठाउँमा सहकारी संस्थाले पनि सेयर आवेदनका लागि सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
सेयर आवेदनका लागि बैंकमा स्थानीयको भीड लागेपछि संकलन केन्द्र आसपासका बजारको होटल व्यापारसमेत बढेको छ । त्यसैगरी फोटोकपी र फोटो स्टुडियोमा समेत भीड देखिएको छ । धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ जेठ १२ मा जारी भएर नयाँ व्यवस्था भए तापनि अपर तामाकोसीमा स्थानीयलाई भने पुरानै प्रणालीअनुसार सेयर आवेदनको व्यवस्था गरेको छ । यसले सेयर आवेदनका लागि नागरिकता, बच्चाको हकमा जन्म दर्ताको फोटोकपी र फोटो अनिवार्य छ ।
३० हजार बराबरकै आवेदन
अहिलेसम्म आवेदन गर्नेहरु अधिकाँशले अधिकतम सीमा ३० हजार बराबरकै सेयरमा आवेदन गरेका छन् । ३० हजारको आवेदन गर्ने पनि काठमाडौंमा बसोबास गर्ने नै बढी देखिन्छन् । आयोजनाका प्रवक्ता. डा. न्यौपानेले अहिलेको आवेदन औसतमा २२ हजार प्रतिव्यक्ति परेको बताए । यही अनुपातमा आवेदन भए यही साता नै माग बराबरको आवेदन पर्ने अनुमान गरे । अहिलेसम्म जिल्लामा डेढ लाख बढी फाराम वितरण भएको छ । तर क वर्गकाले २० हजार, ख वर्गले १० हजार र ग वर्गले ६ हजारभन्दा बढी आवेदन गर्नु नपर्ने सेयर विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अपर तामाकोसीको सेयर जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो सेयर हो । सरकारले समेत यसलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन स्वयं दोलखा आएर संकलनको शुभारम्भ गरेका छन् । स्थानीयका लागि वितरण भएको सेयरमा यो नै सबैभन्दा बढी बिक्री हुने अनुमान छ ।